"Mampalahelo isika" - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Any ianao Ra-Lakroa
Antananarivo, 7 aprily 2020
Miarahaba anao Ra-Lakroa ary mirary soa ho anao amin'izao fotoana tsy ifankahitana an-taratasy izao. Misaotra ny tekinolojia ahafahana mampita ny zava-misy aty anaty tanàna aty.
Koa satria mitohy ny fahamehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena, dia mitohy koa ny fahasahirananay. Izaho manoratra dia mpiasa mpandroso sakafo. Sinoa ny mpampiasa anay.
Rehefa tsy miasa izahay dia tsy mandray vola. Tsy misy 'contrat' tsy misy 'cnaps' tsy misy 'ostie'. Fahavoazam-be ny anay izao satria mitohy ny tsy fahafahana mivoaka ny trano ka inona no atao? Ny tsenakely fividianana entana aty akaikinay izao no manao fitazomana aina. Angalana vary sy lafarinina. Ary gouter ho an'ny ankizy. Trosa avokoa. Satria na niasa sy nandray vola aza tsy mba misy tahiry. Ny taty amin'ny fokontaninay mba nisy naka anarana saingy izay efa nasiana etikety fa sahirana hatrizay ihany no raisiny. Dia nodinganiny ny varavarako sy ny fahoriako.
Fanampin'izay nanatitra fanampiana teny amin'ny lapan'ny tanana ny fikambanana sinoa : vary sy menaka. Fa tsy mba nampiantso anay mpiasany mila fanampiana anefa. Fa nahoana? Mbola ho lava ny ady mbola ho henjana kanefa dieny aty am-piandohana dia efa manahirana ny resaka fanampiana. Mampalahelo satria raha ny toa anay azo antoka fa misy hafa koa any kanefa tsy mba misy mijery ny momba azy. Na ny fiangonana na ny olon-tsotra afaka mifanampy mba hanamaivana izay mavesatra. Ary tsy afaka handresy mihitsy isika raha tsy mahay mifanohana sy mifampitsinjo. Ka miantso sy manaitra izay afaka mifanampy fa fotoanany izao.
Chronique de Razaf : Il y a plus urgent - il y a 6 mois
Matoan-dahatsoratra : Misafotofoto sy mifamahofaho ! - il y a 9 mois